Meksika, Etazonia: Iza No Hanefa Be Amin’ny Kolikoly Nataon’ny Wal-Mart? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2012 2:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, polski, Italiano, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay ny Fifandraisana & Fitoniana manerantany.
Efa lasa tokoa mantsy irony fotoana mamy naha-mpiara-miombona antoka tamin'ny Wal-Mart. Tamin'ny 2011, ohatra, dia voahosotra ho iray amin'ireo vondron'orinasaa 10 isan'ny mpandàla mangarahara indrindra tao Meksika izy [es]. Nefa ity iray isan'ny vondron'orinasa goavana indrindra eran-tany ity dia nidiran'angano taorian'ny nipoiran'ny porofo nilaza fa hoe nanome 24 tapitrisa dolara amerikana hanambatambazana manampahefana Meksikana ny sampan-dry zareo any Meksika teo anelanelan'ny 2002 sy 2005. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny the New York Times nivoaka tamin'ny Aprily 2012, notazonin'ny Wal-Mart ho tsiambaratelo ity vaovao ity hatramin'ny 2005, fony nisy mpiasa taloha tao Meksika nitsoka ny anjomara fanairana.
Nanararaotra ny zava-nisy mba hiampangana ireo zava-panao tsy mety rehetra ao amin'ilay orinasa, ireo vondrona mpisolovava sy mpiasa mitaky fanavaozana ao amin'ny Wal-Mart dia nandrirotra ilay tantara ratsy ho amin'ny fangatahana ny fametraham-pialan'ny Filoha Tale Jeneralin'ny Wal-Mart, tanaty fanangonan-tsonia tety anivon'ny aterineto natomboky ny Organization United for Respect at Wal-Mart (Our Wal-Mart) ny volana May tao amin'ny Change.org.
Koa satria ny Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), na ny Lalàna Mandrara ny Fanaovana Kolikoly Any Ivelany, misy ao Etazonia dia nampiharina matetitetika amin'izao fotoana miohatra amin'ireo taona maro tany aloha, mitodika any amin'ny hoe hatraiza no ho famaizan'ny manampahefana Amerikana ny Wal-Mart. Izy ity koa tahaka ny mitondra mankany amin'ny fanontaniana raha tena nanome tombon-dahiny tokoa tamin'ny firoboroboan'ny ara-toekaren'ny Wal-Mart ny tsolotra nataony, na hoe teraka mivantana avy amin'ireny tsolotra ireny ny tombombarotra azony.
Herinandro iray na mihoatra kely monja nialoha ny tatitry ny the New York Times tamin'ny Aprily, dia namoaka sary iray ahitàna ny Filoha Calderon mitafa amin'ny Filoha Tale Jeneralin'ny Wal-Mart Michael T. Duke tao Kolombia ny biraon'ny Filoha Felipe Calderon. Ny lehiben'ny birao Meksikana fanontàna ny gazety McClatchy Newspapers, Tim Johnson manoratra toy izao ao amin'ny bilaoginy:
Tamin'io fihaonana io, Calderon “dia nankasitraka ny Wal-Mart amin'ny firotsahany an-tsehatra ara-tontolo iainana amin'ny fampitomboana ny famokarana angovo madio” sady nankalaza ilay orinasa ho mividy mivantana ny vokatr'ireo tantsaha Meksikana, hoy ny biraony. Duke, tetsy andaniny, dia nanambara fa i “Meksika dia ohatra iray ho an'ireo zana-tsampany manerana izao tontolo izao” raha resaka firotsahana an-tsehatra.
Mexfiles dia mandalina ny mety ho fiantraikan'ilay tantara ratsy Wal-Mart eo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena atsy ho atsy, amin'ny fanamarihana hoe ny mpirotsaka avy amin'ny antoko PAN, izay ny antokony no nifehy ny governemanta federaly tamin'ny fotoana nitrangan'ilay kolikoly (ary hatramin'izao) dia tsy naneho hevitra mikasika ilay olana. Mandritra izany fotoana izany kosa ireo roa mpanohitra azy akaiky dia mangataka ny hanaovana fanadihadiana. Mexfiles koa dia manamarika fa ny fitantanan'Atoa Calderon dia nampandany lalàna vaovao ‘anti-trust’ sady manontany tena raha toa ka azo heverina ho toy ny fifaninanana tsy ara-dalàna ireo fomba fanao mitratrevatrevan'ny Wal-Mart amin'ny fanaovana kolikoly sy fanitarana, manoloana ireo mpandraharaha Meksikana mpaninjara goavana izay voahilika hivoaka ny tsena:
Marco Antonio Gómez Lovera ao amin'ny Vivir Mexico [es] dia nilaza ho zendana tamin'ny nisafidianan'ireo mpitantana ny Wal-Mart hanafina fa hoe fantatr'izy ireo ny amin'ilay kolikoly, na izany tany Etazonia, na ny tao Meksika, fa tsy tonga dia nanao fanadihadiana lalina sy nanafay izay tomponandraikitra. Nandritra izany, Mexfiles sy bilaogy hafa koa [es] dia nanamafy fa ny fampahalalam-baovao sy ireo manampahefana Amerikana dia mety ho nanamaivana ny fihetsehan'ny Meksikana noho ilay lazaina hoe “Kolotsain'ny kolikoly”.
Ity lahatsoratra ity sy ny dikanteny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay dia tafiditra ao anatin'ny asa tohanan'ny International Security Network (ISN) ho toy ny ampahany amin'ny fiaraha-miasa hitadiavana izay hanelezana ny feon'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra eo amin'ny resaka fifandraisana sy fitoniana iraisam-pirenena manerana izao tontolo izao. Tsidiho ny bilaogin'ny ISN ary jereo ireo tantara maro mifandraika amin'izany.